Qodobada Bill Acholla Martech Zone |
Maqaallada by Bill Acholla
Bill Acholla waa hormuudka suuqgeynta dhijitaalka ee si joogto ah u soo saarta waxyaabo si waalli ah u qiimo badan oo dadka adiga oo kale ah ay u isticmaali karaan inay ku kobciyaan ganacsigooda, sida maqaalkan. Ka fiiri boggiisa ganacsiga barta Billacholla.com
Maxay Tahay Darajaynta Kelmada Waligeed Una Noqonaynin Waxqabadkaaga Aasaasiga Ah
Sabtida, Juun 28, 2018 Sabtida, Juun 28, 2018 Bill Acholla
Mar aan fogeyn, istiraatiijiyadda SEO waxay si weyn uga kooban tahay helitaanka darajada ereyada muhiimka ah. Erayada muhiimka ah ayaa ahaa qodobka koowaad ee lagu cabiro waxqabadka ololaha. Dhismayaasha websaydhku waxay ku buuxin doonaan boggaga ereyada muhiimka ah, macaamiishana waxay jeclaan lahaayeen inay arkaan natiijooyinka. Natiijooyinka, si kastaba ha ahaatee, waxay muujiyeen sawir ka duwan. Haddii casharkaaga SEO ee bilowga ah ay ku jiraan adoo adeegsanaya aaladaha Google si aad u ogaato ereyada muhiimka ah ka dibna ugu dhejiso bogga intarnetka oo dhan, way socon kartaa